စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြောင်းစိုက်ခင်းများနှင့် အခြားစိုက်ခင်းများတွင် ငမြော?? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြောင်းစိုက်ခင်းများနှင့် အခြားစိုက်ခင်းများ တွင် ငမြောင်တောင်ဖျက်ပိုးများ စတင်ကျရောက်ခြင်းကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရန်တိုက် တွန်းနှိုးဆော်ထားကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းလှိုင်ဦးက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇွန် ၉ ရက်က ပြောသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ သတင်းထုတ် ပြန်ချက်အရ ဇွန် ၈ရက် ညနေ ငါးနာရီအချိန် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရေဦးမြို့နယ် ဇီးကန်ရွာတွင် တောင်သူဦးမင်းမင်း၊ ဦးဝင်းမျိုးတို့ ၏ ပြောင်းစိုက်ခင်းများနှင့်အခြား စိုက်ခင်းများတွင် ငမြောင်တောင် ဖျက်ပိုးများ စတင်ကျရောက်ကြောင်း သတင်းပေးပို့ချက်များအရ သိရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစိုက် ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းလှိုင်ဦးက”သတင်းရရချင်း ဇီးကန်ရွာကို ရှေ့ပြေးဝန်ထမ်းများ စေလွှတ်ပြီး ကင်းထောက်မှတ်တမ်းရယူပြီး ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်း စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ခရိုင်၊ မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးဝန်ထမ်းများလည်း ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အခုအဲဒီဘက်က ပိုးမွှားကျတဲ့ကျေးရွာတွေမှာ ပိုးမွှားပညာရှင်တွေရော၊ အား လုံးစုပြီး နမူနာကောက်တယ်။ လူထုအားနဲ့လည်း ပိုးမွှားတွေကို ကောက်တယ်။ မနက်ဖြန်ကို စု ပေါင်းပြီး ဆေးဖျန်းပွဲလုပ်ဆောင် သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ အဆိုပါဒေသတွင် ဧကနှစ် ရာလောက်တွင် ပိုးကောင်စတင်ကျခြင်းဖြစ်သော်လည်း စောလျှင်စွာသိရှိရခြင်းကြောင့် သီးနှံများ ပျက်စီးမှု မရှိကြောင်းသိရသည်။
ဦးဝင်းလှိုင်ဦးက”ကံကောင်း တာကတော့တာဝန်သိ တောင်သူ တွေရဲ့ သတင်းပို့ချက်ကြောင့် ချက်ချင်းအလျင်အမြန်သွားပြီးတော့ ပိုးကောင်ကိုခွဲခြားနိုင်တယ်။ ဖျန်းရမယ့်ဆေး သတ်မှတ်ပေးနိုင်တယ်။ ချက်ခြင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်တိုင်းလုံးကို Alert လုပ်ဆောင်နေပါပြီး ရှိသမျှစိုက်ခင်းတွေ အကုန်လုံးကို ကွင်းဆင်းနေပါပြီး။ ပြောင်းစိုက် တဲ့ဒေသတွေမှာ ချက်ချင်းစိုက်ပျိုး ရေးဦးစီးဌာနကို ဆက်သွယ်ဖို့ကြေ ညာထားပါတယ်”ဟု ဆက်လက် ပြောသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စပါးစိုက်ဧက ၁၈ဝဝဝဝဝ၊ ပဲ စိုက်ဧက ၁၁ဝဝဝဝဝ၊ ဆီထွက်သီး နှံစိုက်ဧက ၈၂၅၆၂၊ ကြံစိုက်ဧက ၁၆ဝ၈၈၃၊ ဝါစိုက်ဧက ၇၆ဝဝဝ၊ အစေ့ထုတ် ပြောင်းစိုက်ဧက ၅၂၇၁၊ အခြားစိုက်ဧက ၄၄၉၈၇၂ ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းစော်ဘွားများ၏ ရှားပါးသော ဝတ်စုံများကို အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ် မှတ်တမ်းမှတ်ရာမျာြး?
”သီချင်းဆိုတာနဲ့ ဇာတ်ကားရိုက်တာ နှစ်ခုစလုံးကို တစ်ပြိုင်တည်း မလုပ်ဘူး။ တစ်ခုပြီးမှ တစ်ခု??
တပ်မတော်ကို ထောက်ခံခြင်းနှင့် ပြည်ပစွက်ဖက် လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆန့်ကျင်သည့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွ
ချင်းဒုက္ခသည်များ အရေး ချင်းခေါင်းဆောင် အချို့ မလေးရှားသို့ သွားရောက် ဆွေးနွေးမည်